राजदूत पाण्डेले बुझाए जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक वर्षपछि राष्ट्रपति सीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ बैशाख १, बुधबार २२:२८
राजदूत पाण्डेले बुझाए जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक वर्षपछि राष्ट्रपति सीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र
HT २०७८ बैशाख १, बुधबार २२:२८
काठमाडौं । चीनका लागि नेपालका राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब १ वर्षपछि आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई बुझाएका छन् ।
बुधबार बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा आयोजित समारोहमा राजदूत पाण्डेले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । पाण्डे २०७७ वैशाख ५ गते चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि चीन गएर जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पाएका थिएनन् ।
स्कूलहरू बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालय किन हच्केको ?
Spread the loveकेशवप्रसाद भट्टराई । निजी र आवासीय विद्यालयको व्यवसायिक स्वार्थमा सरकार, शिक्षक र विद्यार्थी र अभिभावकहरूका संस्थाका नेतृत्वको पनि स्वार्थ जोडिएको हो ? स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू व्यापकरूपमा कोरोना संक्रमित भएका र कसैको दुःखद मृत्यु भएको समेत समाचार आइरहेका छन् । कोरोना महामारीको यो त्राषद चरणमा पनि शिक्षा व्यापारी र […]
२०७८ बैशाख ७, मंगलवार ०८:१४
आज चैते दशैँ, नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
२०७७ चैत्र २४, मंगलवार ०८:४३
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार २१:४७
पूर्वरानी र एमाले वरिष्ठ नेता खनालको स्वास्थ्यमा सुधार
२०७७ चैत्र २१, शनिबार ०८:२६
हात्तीको आक्रमणबाट कैलालीमा एक जनाको मृत्युु
२०७७ चैत्र २६, बिहीबार २१:५६
४० हजार घुससहित प्रहरी जवान पक्राउ
२०७७ चैत्र २४, मंगलवार ०८:४९
कैलालीस्थित नेपाल–भारत सीमा नाकामा प्रहरी र तस्कर समूहबीच गोली हानाहान